Lahaanshaha: Dib u soo kabashada Musiibada, Goynta Sandbox, Iyo Diiwaanka Xogta ee Istaraatiijiyada | Martech Zone
Sanado ka hor, waxaan u haajiray otomaatigeyga suuqgeynteyda oo aan aaday meel caan ah oo si ballaaran loo yaqaan (oo aan ahayn Salesforce). Kooxdaydu waxay qaabeeyeen oo ay soo saareen dhowr olole oo kobcin ah runtiina waxaan bilownay inaan wadno xoogaa ka mid ah taraafikada hogaanka… ilaa ay musiibo ku dhacday. Madalku waxay samaynaysay casriyeyn weyn waxayna si kadis ah u tirtirtay tiro ka mid ah xogta macaamiisha, oo ay ku jiraan kuweena.
In kasta oo shirkaddu lahayd heshiis heer adeeg ah (SLA) taas oo damaanad qaaday waqtigeedii, ma lahayn gurmad iyo soo kabasho awoodaha heer xisaabeed. Shaqadeenu way tagtay shirkaduna ma aysan lahayn awood iyo awood ay ku soo celiso heer xisaabeed. In kasta oo naqshadaheenna dib loo dhaqan gelin lahaa, dhammaan rajadayada iyo macaamilkeenna waxqabad waa la tirtiray. Dabcan ma jirin qaab lagu soo saaro xogtaas muhiimka ah ee qiimaha badan. Waxaan ka shakisanahay inay naga luntay boqolaal kun, haddii aysan ahayn malaayiin doolar oo soo gala. Barxadda ayaa naga saartay qandaraaskeenna isla markiibana waan ka baxay barnaamijkoodii lammaanaha.
Waxaan bartay casharkeyga. Qayb ka mid ah hannaanka xulashada iibiyeyaashayda hadda waxay hubinaysaa in barnaamijyada ay leeyihiin qaab dhoofineed ama keyd ah… ama API aad u adag oo aan si joogto ah ula soo bixi karo xogta. Waxaan kula talinayaa macaamiisha inay sidoo kale sameeyaan.
Mashruucyada meheradaha ayaa sida caadiga ah leh keyd-ballaadhan oo nidaamsan iyo sawirro sawir-qaad ah oo lagu dhisay meheraddooda si loo is-ilaaliyo, laakiin qalabyadani si fudud uma heli karaan macaamiishooda. Milkiileyaasha barmaamijka CRM waxay si qaldan u maleeyaan in sababta oo ah xogtooda SaaS ay ku jiraan daruuraha, waa la ilaaliyaa.
69% shirkadaha ka mid ah nidaamka deegaanka ee Salesforce waxay qirayaan inay u diyaar garoobeen luminta xogta ama musuqmaasuqa.
Shirkadaha sida 'Salesforce' ayaa ka shaqeynaya, cusbooneysiinaya, isla markaana isku xiraya heer xawaare ah boqolaal ka mid ah horumariyeyaasha in ay tahay wax aan macquul aheyn in la horumariyo lana ilaaliyo koodhadhka isbarbar socda ee macaamiisha si ay u keydiyaan oo u sugaan xogtooda. Diiradooda waxay saareysaa xasiloonida nidaamka, waqtiga, amniga, iyo hal abuurka… marka ganacsiyada waa inay fiiriyaan xalka dhinac saddexaad ee waxyaabaha sida keydka.
Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in Salesforce uusan ahayn sababta koowaad ee luminta xogta. Xaqiiqdii, shaqsiyan kamaan arkin iyaga oo si kadis ah u baabi'iya xogta macmiilka. Go'aaminta xogta ayaa dhacday waqti ka waqti, laakiin ma arag masiibo (garaac alwaax). Sidoo kale, Salesforce waxay leedahay xoogaa dhoofinta dhoofinta xogta badan oo la adeegsan karo, laakiin taasi maahan mid kufiican maxaa yeelay waxay ubaahantahay dhisida keyd, jadwal, warbixin, iyo awoodaha kale ee ku xeeran si ay u noqdaan buuxa xal ka soo kabashada musiibada.
Maxay yihiin halista ugu weyn ee macluumaadka shirkadda?
Weeraro isdaba joog ah - Xogta muhiimka ah ee xasaasiga ah ee xasaasiga ah ayaa bartilmaameed u ah weerarada ransomware.
Tirtirida shilka - Dib-u-habeynta ama tirtirka xogta badanaa waxay si kadis ah ugu dhacdaa adeegsadayaasha.
Imtixaan Xun - qulqulka shaqada iyo codsiyada ayaa kordhiya fursada xog la'aanta ama musuqmaasuq la'aanta.
Hacktivists - dambiilayaal dambiileyaal siyaasadeed ama bulsho ku kacsan soo bandhiga ama baabi'iya xogta.
Gudaha Xun - shaqaalihii hore ama kuwii hore, qandaraaslayaal, ama shuraakada ganacsiga ee leh helitaanka sharciga ah ayaa burburin kara haddii xiriirku xumaado.
Codsiyada Xun - iyadoo la adeegsanayo isweydaarsi adag oo codsiyada dhinac saddexaad ah, had iyo jeer waxaa jira fursad ah in barxad si kama 'ah u tirtirto, u qori karto, ama u musuqmaasuqi karto xogtaada muhiimka ah.
Mahadsanid, Salesforce's API-koowaad habka horumarka sida caadiga ah wuxuu hubiyaa in muuqaal kasta ama walxaha xogta si buuxda loo heli karo iyada oo loo marayo kala duwanaantooda ballaaran barnaamijyada barnaamijyada barnaamijyada barnaamijka (oo isdiyaari,). Taasi waxay albaab u fureysaa dhinacyada saddexaad inay qaataan farqiga u dhexeeya ka soo kabashada masiibada… taas oo ah Lahaansho fuliyay.
OwnBackup waxay bixisaa xalalka soo socda:
Dib u soo kabashada iyo Dib u soo kabashada - Ku ilaali xogta iyo metadata dhamaystiran, keyd otomaatig ah iyo soo kabasho deg deg ah, oo aan walwal lahayn.
Salesforce Sandbox Seeding - Ku faafiso xogta sanduuqyada cibaado si hal-abuurnimo dhakhso leh iyo jawi tababar ku habboon loogu wanaajiyo Waxsoosaarka Sandbox-ka La Kordhiyay.
Diiwaangelinta Xogta ee Salesforce - Ku ilaali xogta siyaasadaha haynta ee la beddeli karo iyo u hoggaansanaanta fudud ee OwnBackup Archiver.
Hada Cargill waxay isticmaaleysaa OwnBackup waligeyna waligeen kama walwalin luminta xogta markale. Haddii aan arin leenahay, si dhakhso leh ayaan isu barbar dhigi karnaa una soo celin karnaa xogta dhammaantood laakiin waxaan ka takhalusi karnaa wixii xog ah ee waqtiga dhimman.
Kim Gandhi, Khibrad Macaamiil Khibrad Istiraatiijiyadeed u Leh Qeybta Cargill FIBI
OwnBackup wuxuu si firfircoon kaaga horjoogsanayaa inaad lumiso xogta muhiimka ah ee Salesforce CRM iyo metadata oo leh keyd otomaatig ah iyo deg deg deg deg ah, soo kabasho aan culeys lahayn… oo leh qiimeyn ku habboon heerka isticmaalaha.
Jadwal Jadwalka 'OwnBackup Demo'
Tags: isweydaarsigahal abuurkadadka gudaha u xundib u soo kabashoimtixaan liitaransomwarecodsiyada xunxuniibiniibinta iibsigakeydka iibkakeydinta xogta iibkabadbaadinta musiibadaiibinta ciidda sanduuqa ciidda